Maxakamadda sare ee Kenya oo go’aamisay in dib loogu laabto doorashadii uu ku guuleystay Uhuru Kenyata | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Maxakamadda sare ee Kenya oo go’aamisay in dib loogu laabto doorashadii ...
Maxakamadda sare ee Kenya oo go’aamisay in dib loogu laabto doorashadii uu ku guuleystay Uhuru Kenyata
Muqdisho(SONNA) Go’aan ka soo baxay maxakamadda sare ee dalka Kenya ayaa lagu sheegey in maxakamadu ay diidey natiijada doorashadii uu ku guuleystay Uhuru Kenyata.
Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalkaasi Kenya David Maraga ayaa sheegay in ay ogaadeen in wax isdabomarinno badan ay dhaceen, wuxuuna amray in 60 maalmood gudahood lagu qabto doorasho xalaal ah.
Afar ka mid ah lixdii garsoore ee dacwadda uu ay gudbiyeen mucaaradku qadayay ayaa isku raacay in lagu celiyo doorashada, iyaga oo sheegay in doorashadii 8 Agoosto aysan u dhicin si waafaqsan dastuurka Kenya.
Uhuru Kenyata ayaa 1.4 milyen oo cod ah kaga guuleystay doorashadii ka dhacday Kenya, sida uu sheegey Guddiga doorashada dalkaasi, iyadoo markiiba ay ka soo horjeesteen qolyaha mucaaradka ah,waxayna sheegeen mucaaradka in la jabsaday hanaankii combiyutarada guddiga doorashada laguna shubtay natiijada.
Magaalooyinka dalka Kenya ayaa waxaa ka soconaya banana baxyo lagu taageerayo go’aanka maxakamaddu ay gaartay,taageerayaasha Rail Odinge ayaa sameynaya banana baxyo ayagoo ku dhawaaqaya guul guul iyo ereyo kale.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo” Dhawaan waxaa bilaaban doona howlgalo Shabaab looga sifeynayo gobolada dalka
Next articleSidee maanta looga ciiday Magaalada Khartoum?+SAWIRRO